Amathiphu Ukuze Okuhambayo ngu Isitimela Kids EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amathiphu Ukuze Okuhambayo ngu Isitimela Kids EYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/10/2020)
Unokuthula futhi kujabulise. Amagama amabili ongawezwa abazali besebenzisa lapho betshela owabo travel iholide izindaba nezingane. Ngakho, sinqume ukukunikeza amathiphu abaluleke kakhulu wokuhamba ngesitimela nezingane eYurophu.
Kukhona nje okuthize mayelana izitimela ukuthi uthulisa izingane ngendlela emoyeni noma travel imoto ungalilahli. (Thina wabhala lonke ibhulogi kungani isitimela sokuvakasha kungcono esheshayo futhi Ingcono Ukushayela uma udinga ekholisa ngokwengeziwe kuwe). Same uya ngoba abadala kakhulu! amatafula Umkhaya, ezidlulayo namathafa, Igumbi ukuhamba, cafe izindawo, isikhathi sokuxoxa futhi uhambisane kanye, injabulo nezinjabulo, ayikho imikhawulo umthwalo. Ukuya ngesitimela iphephile, ukhululekile futhi ezingabizi lapho kuhlelwe kusengaphambili. Fundisa izingane zakho izinjabulo travel isitimela kusukela zisencane futhi bayoba nesikhathi sokuphila abaguquka. Okwamanje, nazi Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe.
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Letha Imisebenzi to Occupy Kids
Nakuba ugibele isitimela kuyajabulisa ngokwako nokubheka ngaphandle ungagcina izingane ubungazwa amahora, siphinde isiphakamiso ngokuletha eminye imisebenzi kakhulu. Ukubhuka kusengaphambili futhi uvikelekile isihlalo iwindi nge itafula elikuvumela ukuba basakaze izincwadi Umbala Ungadla!
Abanye imisebenzi isitimela Kunconywa zihlanganisa:
Tablets: Ngokufana indiza, i-tablet kungaba indlela enhle kakhulu kudlule isikhathi. Baningi izitimela eYurophu sipho free Wi-Fi, kepha isevisi alitholakali ngaso sonke isikhathi, ngakho qiniseka ukuthi thwebula movie nemidlalo ekhaya. Ezitimeleni kakhulu, cishe njalo isihlalo esisodwa has kundawo ukugcina electronics yakho icala, kodwa ebayala ekhaya kungakhathaliseki – futhi alethe ama-headphone!
Umbala izincwadi: Umbala amabhuku nemakhilayoni Uyi ozithandayo akunandaba ukuthi uneminyaka emingaki.
imidlalo: Uma ungakwazi ngiyothatha izihlalo etafuleni, kukhona isikhala esiningi ukudlala amakhadi noma yimuphi omunye umdlalo travel. Ngokungafani air travel, ngeke kungadingeki nokuba ukhathazeke ngokusho omawala, ke khetha umdlalo nomndeni wakho eziyizintandokazi bese uya play. Lokhu kungaba ithuba ephelele ukuze empeleni ukuqedela umdlalo monopoly!
Google amathoyizi: Kuye ngeminyaka yengane yakho kanye nentshisekelo, fika izimoto Matchbox noma nezinye imifanekiso (ukucabanga Polly Amaphakethe). Indodana yami uzenza etafuleni kuyinto yomncintiswano ngenkathi indodakazi yami umisa onodoli wakhe omncane ukuze bajabule ku.
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Bonisa ukucabangela abanye abagibeli
Iningi labantu kuyoba ukuqonda kakhulu uma une ikhala noma encane kahle ukuthi kuthatha isikhathi sokwehlisa umoya. Hhayi ukuhlela phambili ngokuvumela Omncane kokubuka yakho ibe isithukuthezi ngenxa yokuntuleka ukuhlela kungenzeka uthole uzwela kakhulu. Uhlelo ukuzijabulisa ukuthi akuyona awayiphazamisi noma kungenzeka yenhlansi agumenti. Asifuni ukuba ukubhala Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe, okungezona ezakho kuwe…nje bayazidlalela!
Florence ukuze Levanto Izitimela
Florence La Spezia Izitimela
ERoma La Spezia Izitimela
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Ukuhamba ngobusuku obubodwa?
Zama njalo ukubhuka egumbini kwi olele isitimela. Ukuthatha izitimela ngobusuku obubodwa yihle, futhi ubuthongo ngokuvamile enkulu ngenxa ukuzamazamisa engokwemvelo isitimela. Kuba njalo zijabulisa ekulaleni nokuvuka kwelinye izwe. linezingxenye Sleeping ngezwe kodwa uma ezintathu kuphela futhi ungafuni ukwabelana egogobele kuwe ke uzoba cishe kudingeka isabelomali ukuthenga i Embhedeni owenezelwe ukugcina ingalali yakho gumbi yangasese.
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Vumela ngokwenu esiningi lapho kokwehla
izitimela abaningi kuphela ayeke amaminithi ambalwa esiphezulu esiteshini ngamunye, imizuzu kanjalo emhlabeni ezinhlanu ngaphambi ufika kufanele ukupakisha izinto, esishukumisayo ingalali izingane, ukugqoka izambatho ngokuletha izikhwama off eshalofini phezulu. Leli zinga yenhlangano unikeza omningi ukuthula kwengqondo ikakhulukazi uma Ziningi izingane noma eziningi wemithwalo. Uma yesikhulumi imatasa, ukuqinisekisa izikhwama zakho sizoya kuqala endleleni eminyango, ke ukuletha izingane phansi kamuva, ukuze angavumeli muntu bedukile.
Brussels ukuze Rotterdam Izitimela
E-Antwerp liye Rotterdam Izitimela
Berlin ukuze Rotterdam Izitimela
Paris Rotterdam Izitimela
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Letha stroller Yakho On Board
Esinye isizathu ukusebenzisa siqeqesha esikhundleni air travel wukuthi ungakwazi Ibhande izingane zakho ngqo stroller bese Roll nabo ngakwesokudla ku- isitimela, without the headache of having to dismantle and then reassemble the stroller. You can sometimes even park your stroller in the snack area or other open places on the train (ezifana endaweni kufinyeleleke inqobo nje uma kungenziwanga elalihlala nomuntu osebenzisa isihlalo esinamasondo), okuyinto eziwusizo kids abasha abayoba abalele stroller zabo. Lokhu kuyinzuzo enkulu phezu travel indiza njengoba mina thola ukuthola izinyane ukulala esitimeleni lula kakhulu.
Bremen eNuremberg Izitimela
Leipzig eNuremberg Izitimela
Hanover eNuremberg Izitimela
Hamburg eNuremberg Izitimela
Amathiphu ehamba ngesitimela nezingane e-Europe: Fika Mayelana 30 Amaminithi Early
Enye yezinzuzo eyinhloko ehamba ngesitimela nezingane e-Europe noma ikuphi emhlabeni ngaleso sento. Ingabe ukuba zinike isikhathi ukufika! Ngokungafani air travel, awudingi ukuze ufike esiteshini sesitimela ikude kakhulu ngaphambi kwesikhathi. Kepha lapho ehamba nezingane, siphakamisa ukufika mayelana 30 imizuzu ekuseni ukuze ngokwakho elitholakala, mhlawumbe kancane ngaphambili uma yokugezela izitobhi kanye okulula amakhefu lwekusebenta. ngokuvamile, inqubo boarding angeke kuqale kuze kube 10 imizuzu ngaphambi kokuhamba okungenani, kodwa ungafuni ukuba belwela futhi uzithola egijima ngokusebenzisa esiteshini umatasa.
Munich, eBasel Izitimela
Zurich, eBasel Izitimela
Bern, eBasel Izitimela
Geneva, eBasel Izitimela
Mhlawumbe ichopho esibaluleke kunazo zonke. Ungadla! Abafana abaningi eside imizila ibanga isici izimoto full-service yokudlela elinokudla icwecwe – ukucabanga ubhontshisi French, ushizi eyosiwe, meatballs ne Penne. On kwemizila enqamulelayo nemizila, izitimela inamabha isidlo ukunikela sandwich, bagels, chips, nezinye Ungadla. Ungafuna ukupakisha ezinye izingane zakho Ungadla ozithandayo kungakhathaliseki Nokho! Ukuhamba nge usana? Letha ingane ukudla noma ifomula ucele abasebenzi ukudla-service ukuxoxa yona. Ungenza ukubhuka ngoba imoto yokudlela ngokushesha ngemva boarding. Njengoba njalo uma uvakasha nezingane, ngaso sonke isikhathi kufanele ulethe Ungadla kanye iziphuzo, uma ungeke uthole ukubhuka noma ibha isidlo enquma shaqa izingane zakho nje lapho ukumemezela ukuthi belamba.
Ukulungele Brave uhambo Isitimela izingane manje ukuthi behlome ngemibese Amathiphu lwethu ehamba ngesitimela nezingane? Omkhulu! Ukubhuka amathikithi akho nge Londoloza Isitimela, awahluphi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho? ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travelingy-train-kids-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / de noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#holidaytips #kidsonatrain #kidstrips #travelwithkids europetravel iholide lomndeni longtrainjourneys
5 Kuhle Christmas izimakethe EJalimane